कसरी Viber मा स्पाम ब्लक गर्ने - Semalt विशेषज्ञ कन्सर्न्स
के तपाइँले यस महिना Viber मा स्पाम सन्देशहरू पाउनुभयो? बन्द अवसरमा, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न, यी सन्देशहरू चारै तिर छन्।
सबैभन्दा आधुनिक आक्रमण होईन, यी जानकारी दिने असुविधाहरू सामान्य रूपमा अन्त हुँदै गइरहेका छन्। त्यो आधारमा हो कि आजको कुराकानी गर्न नवीनता प्रयोग गर्न र ट्रिक गर्न यति स्वाभाविक छ।
यहाँ Semalt का अग्रणी विशेषज्ञ र्यान जोनसनबाट केहि उपयोगी मुद्दाहरू छन्, जसले तपाईंलाई तपाईंको Viber खाता स्पाम सन्देशहरूबाट बचाउनको लागि निर्देशन दिन्छ।
हामी Viber क्लाइन्टहरूबाट लगातार बढ्दो विरोधको बारेमा सुन्निरहेका छौं कि उनीहरूले Viber मा स्प्यामको पर्याप्त मात्रामा पाइरहेका छन्। यी सन्देशहरू मध्ये केहि नगण्य ईरिटेशनहरू हुन्। यद्यपि ती मध्ये धेरै खतरनाक छन्। फिसि messages सन्देशहरू व्यक्तिगत जानकारी, चार्ज कार्ड नम्बरहरू, वा ग्याजेटहरूमा मालवेयर परिचय गर्न को लागी प्रयास को लागी सबै को हिसाब गरिएको छ, र Viber ग्राहकहरु को एक पर्याप्त उपाय अनुप्रयोग को कल्याण मा जोड दिए।
Viber विचार को लागी नि: शुल्क सन्देशहरु को बीच Viber ग्राहकहरु को लागी आवेदन को पेश गरीएको छ को सेल फोन मा। किनकि यो एक टेलिफोन नम्बरसँग सम्बन्धित छ, ग्राहकहरू काल्पनिक रूपमा केवल एक मात्र रेकर्डहरू सेट गर्दछ, र ती रेकर्डहरू सेल फोनसँग सम्बन्धित छ। यसले संकेत गर्छ कि Viber एक फाइदाजनक जानकारी स्टेज हो - तर यसले थप यसलाई स्प्यामर्सको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। यस तरीकाबाट, तिनीहरू Viber ग्राहकहरूलाई स्प्याम पठाउन उत्सुक छन्।
जे भए पनि, तपाईले स्प्यामरलाई अवरोध गर्न सक्नुहुनेछ, र Viber यसलाई कडा बनाउन को लागी कसरत गरिरहेको छ स्प्यामरलाई तपाईंलाई उत्तेजक सन्देशहरू पठाउनको लागि।
के भइरहेको छ, चारै तिर, यो हो: केहि स्प्यामरले तपाईंलाई डज जडानमा ट्याप गर्न आवश्यक छ, त्यसैले ऊ वा उसले त्यसमा व्यक्तिहरूको विशाल परिमाणको साथ भेला पार्छ।
सन्देश सबैलाई पठाइएको छ, स्प्यामरले सभा छोड्छ, र तपाईं कुनै पनि तरिकामा बीम बायकट शेड्स, वा नाफाको आशाको लागि दृष्टिकोणको लागि डडिंग व्यवस्थाको साथ छोड्नुभयो।
केही Viber ग्राहकहरूले स्प्यामको एक उच्च मापन देखेका छन् उनीहरूको रेकर्डमा पठाइयो। यी सन्देशहरू Viber द्वारा पठाइएको छैन, र ती संगठन द्वारा अधिकृत छैनन्। Viber Media ले ग्राहकलाई विज्ञापन पठाउने छैन र गर्दैन।
दुःखको कुरा, यसको मतलब यो होइन कि केहि ट्रिक विशेषज्ञहरू वर्तमानमा व्यक्तिलाई स्पाम पठाउन चरणको उपयोग गर्न प्रयास गरिरहेका छैनन्। केही क्षणिक साइटहरूले व्ययका लागि ग्राहकलाई स्पाम सन्देश पठाउन प्रस्ताव गर्न शुरू गरिसकेका छन्, र भाइबरले यी बन्द गर्न प्रयास गरिरहेको छ।
बन्द अवसरमा तपाईले सन्देशहरू पाउँदै हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई आवश्यक पर्दैन, यो तपाईंले गर्नु पर्छ:
१. यदि कसैले तपाईंलाई स्पाम सन्देश पठाउँदछ भने, यसलाई खोल्नुहोस् र छनौटहरू छनौट गर्नुहोस् (आईओएसमा, यो माथिल्लो दायाँ कुनामा चक्र हो)।
२. "यो सम्पर्क स्क्वायर" चयन गर्नुहोस्, जस्तै तपाईले नियमित रूपमा ग्राहकको लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
You. तपाईं त्यस्तै स्प्यामरलाई यो पृष्ठमा शीर्षक हेरेर Viber लाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। "विशेष मुद्दा" छनौट गर्न एक विन्दु बनाउनुहोस् र Viber लाई प्रकट गर्नुहोस् तपाइँ ग्राहकबाट स्प्याम प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। थप रूपमा, स्प्यामरको टेलिफोन नम्बर Viber लाई खुलासा गर्नुहोस्, र तिनीहरू त्यस बिन्दुबाट यसमा सम्झौता गर्नेछन्।
हामीलाई विश्वास छ कि भविष्यको भाइबरको प्रकारले एप्लिकेसनमा स्प्याम रिपोर्ट गर्न क्षमता समावेश गर्दछ। वर्तमानका लागि दोषी पार्टीहरूलाई रोक्नु उत्तम काम हो जुन तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ।